Hanova ny sary ho teny hanovana | Famoronana an-tserasera
Avadiho ho Word ny fanovana ny sary
Encarni Arcoya | | Cheats
Loharano sary Hanova ny sary ho Word hovaina: Photogramio
Alao an-tsaina hoe avy nanao sary tonga lafatra ho anao ianao. Izy io dia misy infographic ary hampiasainao hampisehoana ny tetikasanao. Ary rehefa jerenao ao amin'ny birao dia hitanao fa manana hadisoana izy. Fahadisoana mahafaty! Azo antoka fa mety manana ilay rakitra voalohany ianao ary manova azy haingana, fa ahoana kosa raha tsy manana ianao? Aza manahy, aza mahazo ny "ratsy fito" azonao atao avadiho ho lasa teny fanovana ny sary. Hainao ve ny manao azy?
Raha toa ianao ka nahita ny tenanao tamin'ity toe-javatra ity ary tsy nahafantatra fa ny sary dia azo avadika ho Word hovaina, izao dia hijanona mandrakizay ny olana satria homenay anao ny lakileny hanaovana izany mora foana.
1 Maninona no ovay ho Word
2 Fomba hanovana sary iray ho Word hovaina
2.3 Niova fo
Maninona no ovay ho Word
Marina fa rehefa mamadika sary amin'ny Word ny singa sasany dia ho very, dia tsy hitovy amin'ilay sary tany am-boalohany, izay angamba ho ravana izy io ary mila miovaova ianao. Fa ny tena marina dia ilaina ny fahalalana manova sary amin'ny Word hovaina.
Voalohany, satria hahafahanao mamerina mametaka ilay lahatsoratra na ampahany amin'ny sary aza, ka havaozina na esorina ireo lesoka izay an'io sary io.
Faharoa, satria azonao ampifandraisina amin'ny asanao izany amin'ny alàlan'ny fanovana na famafana ny ampahany tsy mahaliana anao, fa tsy mamela ny sary ho toy ny mahazatra, izay tsy soso-kevitra indraindray.
Ary, fahatelo, satria amin'izany fomba izany dia tsy hiankina amin'ny programa fanitsiana sary ianao. Ny zavatra mahazatra dia ny fanananao azy amin'ny solosaina sasany fa amin'ny fotoana hafa dia tsy toy izany, na tsy manana fitaovana sy ilay tany am-boalohany ianao hamerenana azy io, noho izany dia mila manao gobs ianao na manomboka amin'ny rangotra mba hanovana ireo fanovana.
Noho izany rehetra izany tsara foana ny manana an'io "làlana mandositra" io raha ilaina. Mazava ho azy, ny zavatra tsara indrindra dia ny mitazona ny tany am-boalohany amin'ny psd, izay endrika ahafahanao mamerina ny sary amin'ny ampahany ilainao. Ny zava-mitranga dia satria lehibe sy mavesatra izy io, tsy vitsy no mitazona azy mandritra ny herinandro, volana na taona ary, rehefa tena ilaina izany, dia tsy mahita azy intsony. Ka manana vahaolana hafa ianao.
Fomba hanovana sary iray ho Word hovaina
Loharano: Youtube (Uncle Tech)
Mandeha amin'ny ampahany azo ampiharina, ny marina dia misy fomba maro hanovana sary ho Word ho fanitsiana. Ny ankamaroan'izy ireo dia amin'ny alàlan'ny pejy web misy ity fitaovana ity. Na izany aza, alohan'ny hanomezana anao ohatra ny amin'izy ireo, te-hanome fampandrenesana ho anao izahay.
Ary ny fampakaranao ilay sary any amin'ireo mpizara azy ireo dia hahavery anao izany. Inona no tiana holazaina? Eny, tsy tena fantatrao izay hataon'izy ireo amin'izany. Ny ankamaroan'izy ireo dia mamafa azy ireo rehefa afaka kelikely, fa ny hafa kosa afaka mitazona izany, na mandika azy ...
Noho izany, rehefa tena zava-dehibe ny sary, raha manana angon-drakitra manokana ianao, na lafin-javatra tsy maintsy itandrovana ny filaminana, dia asaina manao ny fiovam-po ianao miaraka amin'ireo programa napetraka ao anaty solosaina.
Miaraka amin'izany, ny fomba hamadihana sary ho Word ho fanitsiana dia toy izao manaraka izao:
Manomboka amin'ny fitaovana an-tserasera izahay izay hamadika ny sary ho Word ao anatin'ny segondra vitsy. Mazava ho azy, ho an'ny fiovam-po, ny sary dia takiana amin'ny endrika JPG, satria raha tsy izany dia tsy ho vita izany.
Ankoatra izany, ny rakitra apetrakao dia tsy afaka mihoatra ny 100MB ary raha mampakatra sary maromaro ianao dia tsy tokony hihoatra ny 150MB ireo (izany dia ahafahanao mampiditra sary hatramin'ny 20).
Rehefa mampakatra azy ianao dia ahafahanao misafidy ny endrika tianao hamadika azy, na ao amin'ny Word 2007-2019, Word 2003…. Azonao atao ihany koa ny mahafantatra ny toetra optika amin'ny sary. Mila mamely ny bokotra fizarana fotsiny ianao dia hikarakara ny zava-drehetra.
Safidy iray hafa tokony hanovana sary iray ho Word ho fanovana dia ity, amin'ny Internet ihany koa. Ny sisa ataonao dia ny mampakatra ny sary JPG (tsy manaiky endrika hafa) ary, tsy toy ny hafa, ny hataonao voalohany dia ny manova azy ho PDF. Raha vantany vao vita ianao dia hamadika azy io ho Word. Izany no ny sary dia handalo fiovam-po roa.
Mety hanimba kely ny kalitao izany.
Raha tsy ao amin'ny JPG ny sarinao ary amina endrika hafa, anao ity fitaovana ity satria afaka hanova endrika endrika maro ianao, na fantatra na tsia, izay manokatra ny fahafaha-manao maro isan-karazany.
Ny sisa ataonao dia ny mifantina ireo rakitra, na amin'ny Drive, Dropbox na amin'ny solosainao izy ireo, lazao hoe inona ny endrika sary ary inona no tianao hamadihana azy (amin'ity tranga ity dia Doc izay Word, na dia ianao aza manana koa Docx sy ODT raha tianao ireo endrika ireo).
Amin'ity tranga ity dia handeha hampiasa fitaovana an-tserasera hafa isika hanandramana. Ity dia pejy iray ahafahanao mamadika sary JPG ho Word, fa PNG ihany koa, izay mahatonga azy io ho tena ilaina.
Ny iray amin'ireo zava-baovao momba ny tolo-kevitra teo aloha dia ny Manontany anao amin'ny fiteny izay soratana izy mba hahitanao ny marina kokoa. Avy eo dia mila mampakatra ilay fisie fotsiny ianao, ary rehefa avy nandalo kaodim-sary dia fakafakao ny lahatsoratr'ilay sary.
Ny vokatr'izany dia mahazo antontan-taratasy ianao, matetika miaraka amin'ny tetika mitovy, fa miaraka amin'ny lahatsoratra ihany dia hanjavona ireo sary.
Eny, minoa na tsia, amin'ny Google Drive dia azonao atao koa ny manova sary iray ho lasa Word hovaina. Ny tokony hataonao dia ampidiro ao amin'ny fampirimana Drive ny sary JPG. Avy eo, tsy maintsy mahita ilay rakitra ianao ary, amin'ny fipihana eo dia mila misafidy Open with / Google Docs ianao.
Vantany vao nosokafanao izany dia mankanesa any amin'ny menio ambony, mankany amin'ny File / Dowload (na misintona) Microsoft Word. Ary efa hiova fo ianao.
Amin'izany fomba izany no ahazoanao antoka, satria ny kaontinao manokana io dia manana fiarovana bebe kokoa hanovana rakitra manokana.
Na eo aza izany dia misy safidy fandaharana apetraka, toy ny PDFElement, izay ahafahanao mamadika sary iray ho Word hovaina ao anatin'ny segondra vitsy ary ianao no hibaiko ny tany am-boalohany sy ny valiny raha tsy tianao mampidi-doza ny fiarovana.
Mahafantatra programa na tranokala hafa hanovana sary ho Word ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Avadiho ho Word ny fanovana ny sary